Ahoana ny fizarana rakitra eo anelanelan'ny fitaovana | Androidsis
Ny fomba haingana indrindra hizarana rakitra eo amin'ireo fitaovana Android
Amin'ity lesona fampisehoana video manaraka ity dia hasehoko anao ny fomba tsara indrindra zarao ny rakitra eo amin'ny fitaovana Android amin'ny fomba azo antoka sy haingana, na aiza na aiza misy anao amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny wifi mitovy, na ny zavatra mitovy, ny fomba fandefasana karazana rakitra amin'ny alàlan'ny LAN.
Raha te hanaraka tsara an'ity tutorial ity dia mila misintona mpikaroka rakitra mamela ny zarao ny rakitra eo anelanelan'ny fitaovana mampiasa ny fifandraisana LAN Ho fanampin'ireo fitaovana roa mifandray amin'ny tambajotra Wifi iray ihany. Ny mpikaroka rakitra maimaim-poana tsara indrindra arosoko dia ES File Explorer.
1 Ahoana ny fizarana rakitra eo anelanelan'ny fitaovana Android amin'ny fomba haingana indrindra ary tsy mila tariby na solosaina manokana.
2 Fa ahoana no ahalalako ny adiresy IP an'ny fitaovako Android?
3 Sintomy ny ES File Explorer maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Ahoana ny fizarana rakitra eo anelanelan'ny fitaovana Android amin'ny fomba haingana indrindra ary tsy mila tariby na solosaina manokana.
Ao anatin'ilay horonan-tsary miraikitra izay avelako eo ambonin'ireto andalana ireto ihany aho dia manazava ny dingana tsotra, amin'ny alàlan'ny ES Explorer File Explorer, an'ny zarao ny rakitra eo anelanelan'ny fitaovana Android, amin'ny fomba haingana sy azo antoka miaraka amin'ny hany takiana ilaina ilaina izay alefan'ireo fitaovana alefantsika karazana rakitra mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi iray ihany.
Raha fintinina amin'ny faran'izay betsaka ny dingana efa nolazaiko taminao dia ny tsotra indrindra azonao eritreretina, tsy mila manokatra ny ES File Explorer File Explorer fotsiny isika amin'ireo fitaovana izay tianay handefasana ireo rakitra ary mifantina azy ireo amin'ny fandraisana fitaovana ho, rehefa voafidy daholo, tsindrio ny safidy More:
Avy eo amin'ny safidy anjara:
Safidio amin'ny farany ny varavarankely izay manokatra ny safidinao Alefaso amin'ny LAN:
Fa ahoana no ahalalako ny adiresy IP an'ny fitaovako Android?
Raha te hahalala ny adiresy IP an'ny terminal Android na ny terminal Android izay irianay handefasana rakitra amin'ny alàlan'ny LAN, dia tsy mila mankany amin'ny safidy Wifi an'ny terminal Android voalaza isika ary tsindrio ny bokotra menio na amin'ireo teboka telo an'ny ny ankavanana ambony ary kitiho ny Safidy mandroso izay aseho ao amin'ilay faritra Adiresy IPv4.
Sintomy ny ES File Explorer maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ny fomba haingana indrindra hizarana rakitra eo amin'ireo fitaovana Android
Ny Huawei Honor 7 dia hanana ny anjarany amin'ny Android 6.0 Marshmallow afaka roa herinandro